အဘယ်သူမျှမမျက်ရည်မပါမီးခိုးနှင့်အရောင်တောက်ပ streight ဖယောင်းတိုင် - တရုတ် Litbright ဖယောင်းတိုင် (shijiazhuang)
အဘယ်သူမျှမမျက်ရည်နှင့်အတူရောင်စုံတောက်ပ streight ဖယောင်းတိုင်မျှမီးခိုး
အခြေခံပညာအင်ဖိုမော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G75C-0450H အမျိုးအစား: Votive ပစ္စည်း: Paraffin ဖယောင်းရုပ်အသုံးပြုမှု: စျာပနအခမ်းအနား, အားလပ်ရက်, SPA ကုမ္ပဏီ, ဘာသာရေး, မင်္ဂလာဆောင်, ပါတီ, မွေးနေ့, ပင်မစာမျက်နှာ Lighting, Decoration အမည်: Lighting အရောင်: Multi-color အရသာ: ရှိကြသည်အရွယ်အစား:7* 10cm မီးရှို့ခံရသောအချိန်: 8H ထုတ်ယူခြင်း: စက်အချင်း: 2.1cm: အမြင့်: 24.5cm နောက်ထပ်အင်ဖိုထုပ်ပိုး: Box ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားထုတ်ပိုး: တစ်နေ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှုန်း 30tons: Litbright သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, Air လေကြောင်းလိုင်း, မူလအစ၏ DHL TNT Place: တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း:3× 20'fcl လက်မှတ် ...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G75C-0450H
Size ကို:7* 10cm
အချင်း: 2.1cm: အမြင့်: 24.5cm
ထုပ်ပိုး: Box ကိုထုပ်ပိုး
productivity: တစ်နေ့လျှင် 30tons
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, Air လေကြောင်းလိုင်း, DHL TNT
လက်မှတ်: BSCI BV
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အာဖရိက, အလယ်အလတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အမေရိက, အာရှ, ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ဂျီးရီးယား, ကွန်ဂို, အင်ဂိုလာ, နမီးဘီးယား, ဂီနီ, ဂါနာ, ဘီနင်, ကင်မရွန်း, ဆူဒန်, လက်ဘနွန်, ယီမင်, တောင်အာဖရိက, အဖြစ်အချို့သောဥရောပနိုင်ငံတင်ပို့ခဲ့ ဇင်ဘာဘွေ, ဂမ်ဘီယာ, ဆီနီဂေါ ... ပါကစ္စတန်, အစ္စရေး, တူရကီ, ဟေတီ, ကော့စတာရီ, ရှစ်ဆယ်နိုင်ငံများထက် Insight web studio ၏ပို။
ကျနော်တို့ Walmart, ဂျပန် Daiso, ကိုရီးယား Daiso နှင့်အခြားအကြီးအဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့။
သုံးပါ: မူလစာမျက်နှာ Decoration
လက်မှတ်: အီး ROHS
အလေးချိန်: 10g, 12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80g, 85g, 90g, 95g, 100g, စသည်တို့
Pack: cellophane, ပလပ်စတစ် အိတ်, box ကို Kraft စက္ကူ
Litbright ဖယောင်းတိုင်စက်ရုံနောက်ဆုံးရာစုကိုးဆယ်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးအတွက်စက်ရုံနဲ့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျနော်တို့ဖယောင်းတိုင်တင်ပို့၏ 10 နှစျကျြောရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံဧရိယာအကြောင်းကို 48,000 စတုရန်းမီတာနှင့်ကျွန်တော် Hebei အတွက်အကြီးမားဆုံးဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။4× 20 '' ကွန်တိန်နာ / နေ့: ကျနော်တို့ 800skilled ကျော်လုပ်သားများနှင့် 40 technicians.Our ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများကိုကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည်များအကြားအလွန်ရေပန်းစားနေသောအဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများ၏ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ထက်ပိုမိုရှစ်ဆယ်နိုင်ငံများစသည်တို့, အမေရိက, ဥရောပ, အာဖရိကနှင့်သြစတြေးလျမှတင်ပို့ခဲ့ကြသည်။
အိမ်သူအိမ်သားဖယောင်းတိုင်, အဝေးထိန်း flameless, ဖန်အိုး, တောက်ပဖယောင်းတိုင်, tealight ဖယောင်းတိုင်, မှတ်တိုင်ဖယောင်းတိုင်, ဆုကြေးဇူးကိုဖယောင်းတိုင်, ဖယောင်းတိုင်, ဂျူးဖယောင်းတိုင်, ဘောလုံးကိုဖယောင်းတိုင်, taper ဖယောင်းတိုင်, votive ဖယောင်းတိုင်အတွက်ဖယောင်းတိုင်ဖယောင်းတိုင်ကိုဦးဆောင်
ဖယောင်းတိုင် Box ကို
ဖယောင်းတိုင် Box ကိုထုပ်ပိုး
ဖယောင်းတိုင်လက်ဆောင်ပေးမယ် Box ကို
ထုံးစံဖယောင်းတိုင် Box ကို
ဇိမ်ခံကားဖယောင်းတိုင် Box ကို
စက္ကူဖယောင်းတိုင် Box ကို
က Round ဖယောင်းတိုင် Box ကို
ရနံ့ဖယောင်းတိုင် Yufeng Craft
အဖြူရောင် Stick ဖယောင်းတိုင်
ဝါဂွမ်းမီးစာနှင့် paraffine ဖယောင်းဖယောင်းတိုင်